Rojo JW 642 (1416133-89-5) mpamatsy hplc≥98% | AASraw
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / JW 642
Rating: Sokajy: Vokatry ny vinaingitra Tags: Buy JW 642, JW 642, JW 642 for sale, JW 642 mpamatsy
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mampiasa sy ny famokarana maimaim-poana avy amin'ny gram ka hatramin'ny baikon'ny JW 642 (1416133-89-5), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Endocannabinoids toy ny gncérol 2-arachidonoyl (2-AG) sy arachidonoyl ethanolamide dia lipidia biolojika mavitrika izay tafiditra ao anatin'ireo dingana sinipika maromaro, anisan'izany ny fampiatoana ireo receptors cannabinoid. Ny JW 642 dia singa mahery amin'ny monoacylglycerol lipase (MAGL) izay mampiseho ny sanda IC50 an'ny 7.6, 14, ary 3.7 nM mandidy ny MAGL amin'ny totozy, rat, ary ny atidoha membranes. JW642is mifototra amin'ny MAGL, mitaky haavon-kevitra bebe kokoa mba hampihena tsara ny asan'ny fôsily amin'ny fitrandrahana hydrolase (IC50s = 31, 14, ary 20.6 μM ho an'ny mouse, rat, ary atidoha membranes).
I.JW 642 ireo karazana fototra:
Meny fitetezana 462.4
Storage Temp: amin'ny -20 ° C 3 taona Powder
2. JW 642 Usage:
Ao amin'ny fomba fikarakarana laboratoara, ho an'ny tahiry mandritra ny fotoana maharitra, manoro hevitra isika fa ny JW 642be dia tahirin-tsakafo ao amin'ny -20 ℃. Tokony hiorina mandritra ny herintaona fara fahakeliny.
Ny JW 642 dia natolotra ho vahaolana amin'ny acetate methyl. Raha hanova ny solvent dia alefao fotsiny ny acetate methyl ao anaty rano mangatsiatsiaka ary atsipazo avy hatrany ny solvent amin'ny safidy. Azo ampiasaina ny solventa toy ny ethanol, ny DMSO, ary ny formamide dimethyl, voadio amin'ny gazy miditra. Ny tsy fahampian'ny JW 642 ao amin'ireto solvent ireto dia ny 13,5, sy 11mg / ml, mifanaraka amin'izany.
Ny JW 642 dia miadana be ao anaty paompy mandoaka. Ho an'ny solosaina faran'izay kely ao amin'ny akqueousbuffers, ny vahaolana ethanolika amin'ny JW 642 dia tokony hokarohina amin'ny soritry ny buffer. Ny JW 642 dia manana ny 0.3 mg / ml eo ho eo amin'ny 1: 2 vahaolana ethanol: PBS (pH 7.2) mampiasa io fomba io. Tsy mandrisika ny fikarakarana ny vahaolana enti-mavesatra mandritra ny andro maromaro.
3.What is the dosage of JW 642?
DMSO mankany 100 mM
Ethanol mankany 100 mM
Stability and Solubility Advice: Ny vahaolana sasantsasany dia mety ho sarotra ny mahazo ary mety ho reraky ny famporisihana haingana, ny fahamaizinana na ny fiakaran'ny hafanana (ao anaty rano rano 45-60 ° C). Ny fampahalalana momba ny fahamarinan-toerana momba ny vokatra, indrindra ny vahaolana, dia zara raha nitatitra ary amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manolotra torolàlana ankapobeny fotsiny isika. Ny fanoloran-tsoratra nasainay dia: SOLIDS: Ny fametrahana ny tahiry dia aseho eo amin'ny mari-pamokarana vokatra ary ny fitahirizam-po dia mihidy tsara, ny vokatra azo tahiry hatramin'ny 6 volana isaky ny daty. SOLUTIONS: Manoro hevitra isika fa ny vahaolana tahiry, alohan'ny hanomanana azy, dia tahirin-tsakafo ao anaty vialsat voa-tombo -20 ° C na ety ambany ary ampiasaina ao anatin'ny volana 1. Raha azo atao ny mamaha ny vahaolana ary ampiasaina amin'ny andro iray ihany.
4.How miasa i JW 642?
Ny JW 642 dia potika sy marefo monoacylglycerol lipase (MAGL) (hibitor) = ICNUMX nM). Mampiseho> ny selekta 3.7-fold amin'ny MAGL amin'ny amidehydrolase asidra (IC = 1000 μM). Monoacylglycerol lipase (MAGL) isa serine hydrolase tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny hydrolysis an'ny 20.6-AG amin'ny asidra arachidony sy glycerol, ka mamarana ny asany biolojika. Ny vokatry ny toxikolojika dia mety hiteraka tahaka izao: Methyl Acetate - Toxicity Data: Oral LD2 (rat):> 50 mg / kg; Oral LD5,000 (bitro): 50 mg / kg; Skin LD3,705 (bitro):> 50 mg / kg; Inhalation TCLO (olona): 5,000 mg / m15,000; Methyl Acetate - Data diso: Skin (bitro): 3 mg (500h) mild; Ny maso (bitro): 24 mg (100h) miovaova.
I. Fiarovana sy fihenam-bidy
Miorina eo ambanin'ny fitaterana na fitehirizana entana.
5.2 Toe-javatra ara-pahasalamana
Miorina eo ambanin'ny toeram-pamokarana.
5.3 mety ho fanehoan-kevitra mampidi-doza
Ny fanehoan-kevitra mampidi-doza dia tsy hitranga amin'ny fitaterana ara-dalàna na ny fitehirizana ny fitehirizana. Ny fatiantoka dia mety hitranga amin'ny fifehezana ireo fepetra na fitaovana voatanisa etsy ambany.
5.4 Conditions mba hisorohana ny hafanana, ny fahamendrehana.
5.5 fitaovana tsy mifanaraka
Asidra mafy / alkalisa, mpanamory fiaramanidina matevina / mampihena.
5.6 vokatra mampidi-doza
Mety handroaka rivotra goavam-be ny fiara. Tsy misy fampahalalana momba ny famoizana fantatra.
II.Handindriana sy fitehirizana
Toro-làlana 5.1 ho an'ny fikarakarana azo antoka
Ampiasao ao anaty lavaka fanodina simika, miaraka amin'ny rivotra nomen'ny rafitra mahaleo tena. Aza misotro toaka, mifandray amin'ny maso, hoditra ary
akanjo. Aza manamboatra vovoka sy lobolobo. Ampiasao ao amin'ny faritra mafana ny rivotra. Mialà amin'ny loharanom-pahavoazana. Aza
mitohy na averina miverimberina.
Ny fepetra 5.2 ho an'ny fikojakojana azo antoka, anisan'izany ny tsy fitoviana.
Mitahiry faritra mahafinaritra sy ventilated. Mialà amin'ny hazavan'ny masoandro. Tehirizo tery am-paty mialohan'ny hidirany.
Temitra fihenam-bidy: Mivahà -20 ° C
5.3 ampiasain'ny endriny manokana
Ampiasao ao anaty lavaka fanodinana laboratoara raha azo atao.
6.JW 642 Powdle Raw:
7.JW 642 Fofona ronono voadona:
9.Does JW 642 dia misy fiantraikany hafa?
Ny fitaovana dia mety hanorisory ny mikraoba sy ny trakta avo lenta; Mety hampidi-doza amin'ny fanafody, ny fitsaboana, na ny fanamafisana ny hoditra; Mety hahatonga ny laharam-pahamendrehana; Mety hampijaly ny hoditra na ny rafi-panafody. Ny fipoahana miverimberina dia mety hitera-pahavoazana na hikapoka.
Fanaraha-maso ivelany / fiarovana manokana
Parameter Control an'ny 9.1
Ireo singa manan-danja amin'ny paikady mifehy ny asa
Tsy misy singa manana tombam-bidy eo amin'ny sehatry ny asa.
9.2 fanaraha-maso fanandramana
Fitsipika fanaraha-maso mifanentana
Ampiasao ao anaty lavaka mangotraka rehefa azo ampiharina. Araho ny fepetra rehetra entina hanoratana ny fizarana 7 an'ny SDS.
Ataovy antoka fa ny laboratoara dia misy rano fisotro madio sy maso mitsinjara.
Mampiasà solomaso azo antoka.
Ampiasao ny fonon-tanana azo antoka azo antoka (BSM 374: 2003). Tokony ho ny fonon-tànana
Voamarina alohan'ny fampiasana azy. Sasao amin'ny tanana ny tanana ary sasao ny tananao.
Fiarovana ny vatana
Raha toa ka manamarika fa ilaina ny fanombanana ny risika dia ampiasao ny solosaina mety.
miaraka amin'ny hafa
IV. Ahoana no hividianana JW 642 avy any AASraw?
Aoka ianao hojerena aloha ny "JW 642" hanafoana ny valin-